Air Con သုံးနေသူများ သုံးဖို့ စိတ်ကူးရှိနေသူများ အရေးကြီးလို့ပါ။ - Mingalarday
Home > ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ > Air Con သုံးနေသူများ သုံးဖို့ စိတ်ကူးရှိနေသူများ အရေးကြီးလို့ပါ။
အဲယားကွန်း အသုံးပြုသောအခါ လိုက်နာသင့်သည့် (အခြေခံ) အချက်လက်ထဲမှအချို့ဖြစ်သော (၁၉ချက်) ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် .
၂။ Remote Control ကို အသုံးပြုပြီး မိမိနှင့် သင့်တော်မည့် အပူချိန်မှာ ချိန်ထားသင့်ပါသည်။ (အရမ်း)မအေးပါစေနှင့်။လူကို (တိုက်ရိုက် )လေမထိုးထားပါနှင့်။အထူးသဖြင့် အိပ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ ၊ ညဘက်လူအိပ်နေချိန်ဖြစ်စေ လူဆီကို အအေးတည့် တည့်မကျရောက်အောင်သတိထားသင့်ပါသည်။
၃။ ညအိပ်ချိန်များတွင်အအေးဓာတ်ကိုထိန်းရန်အချိန်ထိန်းခလုတ်(Timer) ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄။အခန်းတွင်းကို အအေးဓာတ်မပေးပဲ လေချည်းသက်သက်ပေးချင်ပါက Fan mode ပန်ကာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပန်ကာချည်းသုံးခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်ခြွေတာရာရောက်ပါသည်။
၉။ Air con Indoor Filter ( လေစစ်ဆန်ကာ) ကို ဖြစ်နိင်လျှင် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ခန့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ ။ ခရီးရက်ရှည်ထွက်စရာရှိ လျှင်
၁၉။အိမ်အပြင်ရှိ Outdoor unit Condenser တွင် အမှိုက်သရိုက်များ ကပ်နေမနေ ပုံမှန် စစ်ဆေးပါ။ အမှိုက်များကပ်နေလျှင် ရှင်းပေးပါ။
အဲယားကှနျး အသုံးပွုသောအခါ လိုကျနာသငျ့သညျ့ (အခွခေံ) အခကျြလကျထဲမှအခြို့ဖွဈသော (၁၉ခကျြ) ကိုမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ .
၂။ Remote Control ကို အသုံးပွုပွီး မိမိနှငျ့ သငျ့တျောမညျ့ အပူခြိနျမှာ ခြိနျထားသငျ့ပါသညျ။ (အရမျး)မအေးပါစနှေငျ့။လူကို (တိုကျရိုကျ )လမေထိုးထားပါနှငျ့။အထူးသဖွငျ့ အိပျသညျ့အခါတှငျဖွဈစေ ၊ ညဘကျလူအိပျနခြေိနျဖွဈစေ လူဆီကို အအေးတညျ့ တညျ့မကရြောကျအောငျသတိထားသငျ့ပါသညျ။
၃။ ညအိပျခြိနျမြားတှငျအအေးဓာတျကိုထိနျးရနျအခြိနျထိနျးခလုတျ(Timer) ကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
၉။ Air con Indoor Filter ( လစေဈဆနျကာ) ကို ဖွဈနိငျလြှငျ တဈလလြှငျ တဈကွိမျခနျ့ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးပါ ။ ခရီးရကျရှညျထှကျစရာရှိ လြှငျ
အ၀တ်တောင် မကပ်နိုင်အောင် ရူးနေတဲ့ ပဋာစာရီကို မြတ်စွာဘုရား ဘာတရားဟောခဲ့တာလဲ
သုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ရ ယမင်းကိုကို ရဲ့အကြောင်းစုံ